Zavaboary Vaovao - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > by Tammy Tkach > New creatures
Ny ara-panahy indray dia hita taratra amin'ny vatana. Andeha isika hijery manodidina. Andeha isika hijery fitaratra. Ahoana no nahatonga ireny olona ara-nofo, tia tena, zava-poana, tia vola, mpanompo sampy (sns.) ireny ho tonga masina sy tonga lafatra tahaka ny ao amin’ny 1 Petera? 1,15 ary Matio 5,48 vinavinaina? Mitaky saina be dia be izany, izay, soa ihany ho antsika fa manana be dia be Andriamanitra.
Nomena antsika ny fiainam-baovao tahaka ny ao amin’ny 2 Korintiana 5,17 midika hoe: “Raha an’i Kristy ny olona iray, dia efa ‘zavaboary vaovao’ izy. Efa tapitra ny taloha; zavatra vaovao tanteraka (fiainana vaovao) no nanomboka!” (Apok.GN-1997)
Toy ny tsy mitovy amin'ny namboleko teo aloha intsony ireo tongolo ireo, dia tsy mitovy amin'ny olona taloha intsony koa isika mpino. Vaovao izahay Tsy mieritreritra ny fomba taloha intsony isika, tsy mitondra tena sy mitondra ny hafa tahaka ny taloha intsony. Fahasamihafana lehibe iray hafa koa: tsy mihevitra an’i Kristy intsony araka ny fiheverantsika azy taloha isika. Ny Apok. GN-1997 dia manonona ny 2 Korintiana 5,16 toy izao: “Koa hatramin’izao dia tsy hitsara olona intsony aho araka ny [ara-poto-pitsipi-piainany] araka ny fomban’olombelona [soatoavina eto an-tany], na dia i Kristy izay notsaraiko aza [ankehitriny, dia tena hafa noho ny taloha no nahafantarako azy].